दुवै हात गुमेका कृष्णले जव रूपालाई पहिलोपटक अंगालो मार्दा रुवाबासी चल्यो,एउटा हात राख्ने एति धेरै खर्च भयो! – Complete Nepali News Portal
दुवै हात गुमेका कृष्णले जव रूपालाई पहिलोपटक अंगालो मार्दा रुवाबासी चल्यो,एउटा हात राख्ने एति धेरै खर्च भयो!
सामाजिक संजालमा रमाउनुहुने नेपालिको लागी कृष्ण ओलि र रुपा मगर कुनै नौलो नाम हैन । उनिहरुको मायाको तारिफ गरेर सायद कोहिपनी थाग्दैन। बिवाह गरेको बर्ष दिनमै दुबै हात र खुट्टा गुमाएका कृष्ण अहिले मज्जाले हिड्न र हात हल्लाउन सक्ने भएका छन् ।
हात हाल्न मुम्बई गएका यि दम्पती गए राती नेपाल फर्केका हुन् । कृष्णको एक हात मज्जाले चल्ने भएको छ । उनले दाहिने हात आफ्नो सेन्स अनुसार चल्न मिल्ने हात हालेका हुन् । कृष्णले आफ्नो हात हाले लगत्तै रुपाको नाम लेखेका थिए । अव अर्को हात उनले पहिलो हात कत्तिको चल्छ सो अनुरुप अर्को हात दुई महिना पछि हाल्ने बताए । हेरौ बाकी कुरा भिडियोमा: